Solitaire 🥇 Faka futhi ujabulele kusuka Emulator.Online
Isizungu Kuyinto a umdlalo wamakhadi womuntu oyedwa. Njengoba umdlalo udlalwa wedwa, inhloso enkulu akukhona ukushaya umphikisi, kepha ukuxazulula umdlalo, ukuqeqesha ukucabanga kwakho okunengqondo, futhi kwesinye isikhathi kusetshenziselwa nokuzindla.
ISolitaire: Idlalwa kanjani igxathu negxathu?
Ukuze wenze a Isizungu online mahhala, kufanele nje landela le miyalo igxathu negxathu:
I-Paso 2. Ngokushesha nje lapho ufaka iwebhusayithi, umdlalo uzovele uboniswe esikrinini. Kufanele kuphela hit play futhi ungaqala ukukhetha i-solitaire oyithanda kakhulu. Ungakhetha ubunzima obulifanela kangcono izinga lakho lokudlala.
Ngemuva kokuyikhethaUngakhetha futhi inani lezingcezu iphazili ezoba nazo.
Isinyathelo se-4. Thola ukuqeda wonke amakhadi kusuka kumdlalo ukuze uwine. Ngalokhu kufanele ubeke lawa makhadi ezindaweni eziningi zamakhadi weUmbala ofanayo nokuhleleka okuhlelekile.
Isinyathelo se-5. Ngemuva kokuqeda umdlalo, chofoza "Qala kabusha" Ukwenza enye i-solitaire
Yini iSolitaire? 😀
Isizungu (obizwa nangokuthi i-solitaire noma i-solitaire ngesiFulentshi) ngumdlalo wamakhadi womuntu oyedwa. Ukuhumusha okuvela eFrance kukhombisa kahle ukuthi kumayelana nani. Kuhunyushwe, kusho "ukubekezela". Izinhlobo ezahlukahlukene zamaphakethe zingasetshenziswa ukudlala i-solitaire, zombili izindlela ze- i-mallet yaseSpain njengoba i-poker.
Kukhona izinhlobo ezahlukene ye-solitaire esivumela ukuthi sibe neziphakamiso eziningi zokuzijabulisa.
Enye yezimbangela ezinkulu zempumelelo yayo isuselwa ethubeni lokudlala umuntu oyedwa, ngaphandle kwembangi. Ukwenza kube umdlalo ophelele wokuphumula nokuzindla.
Solitaire Indaba 🤓
Isizungu is a igama lezinhlobo ezahlukene zemidlalo yamakhadi. Umdlalo owaziwa kakhulu phakathi kwabo waziwa ngokuthi "I-solitaire yakudala"Imvelaphi yalo mdlalo ayikaziwa, kodwa ukuhlelwa kwamakhadi kuvela kumakhadi okubhula asetshenziselwa ukubhula. Ekupheleni kwekhulu le-XNUMX, umdlalo wakhulunywa okokuqala eNyakatho Yurophu, futhi umdlalo uthathe ku IFrance ekuqaleni kwekhulu le-XNUMX.
UNapoleon Bonaparte kubikwa ukuthi wayedlala i-solitaire kaningi ngesikhathi edingiselwe eSaint Helena ngo-1816. Eminyakeni eyalandela, lo mdlalo waba yinto yokuzijabulisa edumile eFrance futhi ekugcineni wanqoba umhlaba wonke, kuhlanganise neGermany. Amagama amaningi ayedwa (isibonelo, "ibhokisi") avela eFrance.
Nanamuhla, lo mdlalo odumile usayinto yokuzilibazisa ethandwayo kubantu abaningi. Konke okudingayo kukodwa emphemeni wamakhadi, indawo eqondile, neminye imithetho elula. Ngakho-ke cishe wonke umuntu angadlala lo mdlalo.
Isizungu a uhlobo lokuzijabulisa olulula kusukela ngesikhathi lapho abantu babesenesikhathi futhi umhlaba wawungakafiki ekujaheni okunjalo. Akukhathalekile ukuthi uyidlala ngendlela yakudala (ngesandla) noma kwikhompyutha yakamuva - iyakhululeka futhi iqeqeshe ingqondo yakho futhi ithandwa kakhulu namuhla kunanini ngaphambili!
Umlando wemidlalo ye-solitaire kukhompyutha
Ngemuva kokuthi i-PC yokuqala itholakale emakethe, bekuyisinyathelo nje esinengqondo ukudlala inguqulo yedijithali ye-solitaire kuyo. Njengoba ukudlala amakhadi esikrinini kudinga ngokuqhathaniswa amandla amancane wekhompyutha, inani elikhulu lemidlalo livele ngesikhathi esifushane. Ezinsukwini ze-MS-DOS, imidlalo eminingi ibisuselwa embhalweni futhi yenzelwe umdlali oyedwa kuphela.
Kodwa-ke, amakhompiyutha ashesha futhi aba sesimanjemanje, ngaleyo ndlela enza ngcono amathuba wokuqhafaza wemidlalo. Umthamo wememori owandisiwe uphinde wavumela abahleli bezinhlelo ukuthi balingane imidlalo eminingi kuhlelo olulodwa. Yakhiwa kanjena yonke amaqoqo emidlalo ye-solitaire.
Iqoqo lokuqala lokuhweba "ISolitaire royaleYabhalwa nguBrad Fregger futhi yakhishwa yi-Spectrum Holobyte ngo-1987. Umdlalo wawulungele zombili i-PC (MS-DOS) neMacintosh.Wawuqukethe izinhlobo ezihlukene eziyisishiyagalombili, wawunemibala eyi-16 ye-EGA yemibala, futhi wawusetshenziswa ngegundane.
Eminyakeni embalwa kamuva, ngo-1992, iQQP (Ukukhiqizwa Kwekhwalithi ye-Quantum) wethule iqoqo elikhulu elibizwa ngokuthi "Uhambo lukaSolitaireLo mdlalo uphinde wakhishelwa i-MS-DOS futhi uqukethe inombolo ekhexisayo yezinhlobonhlobo zemidlalo ezi-105 ezahlukahlukene, kanye nezibalo eziningiliziwe zomdlalo ngamunye! Abadlali bangakhetha eminye imidlalo hhayi nje ukuhlela uhambo lwabo (uhambo), kepha futhi ubambe iqhaza emishini (izimfuno) futhi uthole amaphuzu athe xaxa lapho ngemuva kokuwina imizuliswano embalwa.
IMicrosoft Windows Solitaire Yaqala ukuvela ku-Windows 3.0 ngo-1990. Ngo-1995, iWindows 95 yakhipha umdlalo weFreecell. I-Freecell yathandwa kakhulu ngaphandle kwesikhashana, futhi kwavela inani elikhulu lezinye izinhlobo ze-shareware zomdlalo. Ekugcineni, ISolitaire ivele eceleni kweMicrosoft XP Spider, elandelwa ukungqongqoza okusha nezinguqulo ezithuthukisiwe.
Namuhla, imidlalo iyatholakala kuyo yonke ipulatifomu ongayicabanga, kufaka phakathi amathebulethi nama-smartphone. Noma ngabe ukuphi, kuhlala kunokuhlukahluka kwe-solitaire etholakalayo ukuphumula nenjabulo!
Idlalwa kanjani i-solitaire: Amathiphu ♥ ️ ♠ ️ ♣ ️
Ithiphu 1: Okokuqala sebenza ngamakhadi we-solitaire ngezansi
Solo, nakanjani kufanele usebenzise la makhadi alandelayo, ngoba lezi zinqwaba zidinga ukukhishwa kuqala.
Bona ukuthi ungabeka yini amakhadi alandelayo ngaphezulu komunye nomunye. Uma ungahambisa amakhadi amaningi ngasikhathi sinye, kufanele usebenzise inqwaba enamakhadi ambalwa njengesiqondisi.. Ngale ndlela uthola isihlalo esingenalutho esisheshayo ngaphansi.
Ngemuva kwalokho ungagcwalisa ngokushesha izikhala ezingenalutho futhi. Vumbulula kuphela isitaki esiphezulu lapho ungakwazi ukwenza okunye ukuhambisa ngaphansi.
Ithiphu 2: i-ace ngayinye kufanele iphakamise ngokushesha
Khumbula ukuhambisa ama-aces ngokushesha.
Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ngama-aces akolunye lwezinqwaba eziphansi. Uyabaphusha ngesandla sakho ungene kwenye yezikhala zamahhala. Ngenye indlela, chofoza kabili i-ace.
Kufanele futhi uhambise ama-aces enqwabeni ephezulu ngokushesha. Ngakho-ke, ungaba nethuba lokuhambisa amakhadi amaningi kusuka kolunye lwezinqwaba eziphansi.
Ithiphu 3: beka i-Lone King esikhaleni samahhala
Sebenza amabhethri ngangokunokwenzeka. Udinga imvume yamakhosi.
Lapho nje senginendawo yamahhala, kufanele uligcwalise ngenkosi. Ngemuva kwalokho beka wonke amanye amakhadi ngokulandelana. Ngale ndlela ungabeka phansi izinhlamvu ngokuhamba kwesikhathi.
Uma ungakhetha phakathi kwamakhosi amabili, kufanele unake umbala ongafaka ngawo iningi lamakhadi.
Okufanayo kusebenza ezindaweni ezimbili zamahhala. Okufanele ukugcwalise lokhu ngenkosi emnyama nesikhathi esisodwa nenkosi ebomvu. Lokhu kwandisa amathuba okukwazi ukudlala amakhadi amaningi ngasikhathi sinye.
Ithiphu 4: shintsha amakhadi
Uma ungasakwazi ukunyakaza noma uma kungekho okubonakala kunengqondo kuwe, kufanele ushintshe.
Bheka amakhadi bese ushintsha phakathi kwawo ukuze ubeke amanye amakhadi ngaphezulu.
Ushintsho lubalulekile futhi imvamisa ukuphela kwendlela yokuphatha umdlalo.
Uma ungasaboni ezinye izitimela, chofoza entweni "Isiphakamiso"kwimenyu. Ngeminye imidlalo ungacindezela u-" T "kukhibhodi bese umdlalo uzokukhombisa ukuthi yikuphi ukunyakaza okungenzeka.
Izinhlobo zeSolitaire 🃏
Kunokwehluka okuningana kwe-solitaire. Uhlu olungezansi luhlanganisa izinhlobo ezahlukahlukene ze-solitaire, kusuka ku-Klondike yakudala ne-Spider kuya emidlalweni edinga isivinini noma, yamantombazane, umdlalo lapho kufanele ucele amakhadi futhi ugqoke imodeli ngayinye.
Okwakudala okwakudala! Oda amakhadi u-Ace kuKing, uwahlukanise ngokwesudi. Ukuze wenze lokhu, hlukanisa amakhadi abe ngamakholomu ngokunyuka kwawo, uhlale ushintshana phakathi kwamakhadi abomvu namnyama, kuze kubonakale yonke indawo. Uma uthola i-ace, isakaze phezulu kwesikrini bese ubeka amanye amakhadi wesudi efanayo kuyo.
Ihluke kancane kunangaphambili, kule solitaire kufanele uhlele amakhadi kusuka eNkosini kuya ku-Ace. Futhi, unesudi eyodwa kuphela etafuleni, noma kunjalo amakhadi azophindaphindwa kaningi, akuvumela ukuthi wenze ukulandelana okungaphezulu kokukodwa oku-odwa.
Inhloso yalo mdlalos susa yonke imibhoshongo yamakhadi, uwafanise ngababili afaka kufinyelela kwayishumi nantathu ukuwasusa esikrinini. Ngaphezu kwamakhadi abekwe ku-piramidi, unamakhadi amathathu angeziwe okumele asetshenziselwe ukuqeda amanye futhi akhulule amakhadi asezansi, kanye nesikhala esingeziwe sokuhlukanisa elinye lamakhadi.
Indlela ingahunyushwa ngokuthi "umzila" futhi ifingqa kahle inhloso nemishini yalo mdlalo. Kufanele wakhe imizila yamakhadi, uwajoyine ngokuya ngobuningi bobuso ngabunye, ekukhuphukeni noma ekwehlelweni. Ikhadi ngalinye lingaxhunyaniswa nekhadi elandulelayo noma elandulelayo noma elinye lamahlaya.
Lapha kufanele uhlanganise amakhadi ngababili afaka ishumi nantathu, njengePyramid Solitaire. Uma ususa amakhadi phezulu kwenqwaba, amakhadi alandelayo azovulwa, kuvulwe amathuba amasha okuhlangana namakhadi amane onawo.
Ijubane yilokho okubalulekile, okungenani kulo mdlalo. Ngokumelene nekhompyutha, kufanele usheshe futhi ususe wonke amakhadi enqwabeni yakho. Ukuze wenze lokhu, faka amakhadi akho kwesinye sezitaki ezimbili maphakathi kwesikrini, ngokuya ngenombolo yekhadi elingezansi, kufanele kube inombolo eyodwa ngaphezulu noma ephansi kunekhadi elisetafuleni.
I-Magic Towers Solitaire
Omunye umdlalo ophathelene nokususwa kwamakhadi ngokuya ngenombolo ngayinye. Umehluko ukuthi kufanele ususe amakhadi ukukhulula isigodlo emibhoshongweni emithathu ezansi, njalo ubuka inani lekhadi eligqanyisiwe ezansi kwesikrini.
Ukubekezela nemfashini ndawonye, ​​emdlalweni omnandi kakhulu. Kufanele uqede wonke amakhadi asesikrinini ngasikhathi sinye lapho ugqoka ngamunye wamamodeli. Ukuqoqa amakhadi ezansi, beka amakhadi anohlobo olufanayo, ngaphezu kokubheka: amanye amamodeli anokuthandwa kwemibala, amaphethini nezitayela.
Ngaphandle kokungabaza, okuthakazelisa kunazo zonke. Kufanele ususe amakhadi esibukweni ngokuhlanganiswa kwe- Mahjong nomdlalo wememori- Bafake ngababili ukuvula amakhadi asezansi futhi, ukuvula amakhadi anengidi, funa amakhadi anokhiye odwetshiwe.